Breastfeeding Videos Mila fanampiana nono ity zaza ity. Ny fomba tsara indrindra handrasainy izany dia amin’ny fanampiana mampinono satria: Mbola mandray nono ilay zaza no mbola misotro nono
Fomba iray fampidirana fantsona manify dia ampidirina rehefa eo amin’ny nono ny zaza. Azo atao koa ny mametraka ilay fantsona eo amin’ny loha-nono vao ampandraisina nono ilay zaza. Mariho ny paozin’ilay zaza
Efa ninono tamin’ny nono roa ilay zaza nefa tsy mahazo ronono firy (mitsetsitsetsitra nono ny ankabezany- jereo ny horonantsary mampiseho zaza misotro sy tsy misotro ao amin’ny nono). Mila fanampiana nono ilay zaza. Mariho ny manaraka: Atosika ny sisin’ny nono mba ahitana ny vavan’ilay zaza
Satria somary mitongilana miakatra ilay zaza dia mora hita any vavany ary mora ampidirana ilay fantsona Atsofoka amin’ny zoron’ny vavan’ilay zaza ilay fantsona
21 segondra amin’ny horonantsary, ahetsiko ilay fantsona dia mikoriana ny nono. Ary misotro ilay zaza. Mariho fa manokatra ny masony ilay zaza nony nanomboka nahazo ronono izy. Ny zaza akory tsy “kamo” fa misy setriny ny fikorianan’ny ronono mora. Zaza mbola kely toa ity hita eto ity dia lasa matory rehefa mihena ny fivoakan’ny nono, fa tsy voatery hoe ampy azy ny ronono azony. Ahetsika kely indray ilay fantsona eo amin’ny 35 segondra. Raha toa ka mipetaka amin’ny nono tsara ilay zaza ary mipetraka tsara ilay fantsona, dia ny fanampiana nono dia tsy mandany fotoana mihoatra ny manome amin’ny tavoahanginono na amin’ny ratsantsanana. Ny fanomezana ronono amin’ny ratsantanana mba hanampiana nono koa dia tsy fomba lafatra fanampiana nono. Eo amin’ny 1min amin’ny horonantsary, sitomiko midina kely ny saokan’ilay zaza. Tadidio fa ny fipetahana tsara amin’ny nono sy ny fametrahana tsara ilay fantsona no mampety tsara ity fomba ity. Rehefa sintomina midina ny saokan’ilay zaza dia mahazo nono betsaka kokoa ao anaty vavany izy. Eo amin’ny 1min sy 18 segondra, sitomina mba tsy hitovy ilay ny paozin’ilay zaza raha oharina amin’ny nono rehefa atosik’ny reniny amin’ny sandriny ilay zaza. Eo amin’ny 1min sy 55 segondra, misy ronono mivoaka eo amin’ny molotr’ilay zaza, midika fa misy tsy mety. Na tafala tamin’ny nono ilay zaza na tafala ilay fantsona. Rehefa ahetsika ilay fantsona dia mikoriana indray ny ronono. Subscribe to our Newsletter